အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဟိုက်ဒရာဘတ်မြို့တွင် ကမ္ဘာ့ တိရစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါနေ့ အထိမ်းအမှတ် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအား အခမဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေး - Xinhua News Agency
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဟိုက်ဒရာဘတ်မြို့တွင် ကမ္ဘာ့ တိရစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါနေ့ အထိမ်းအမှတ် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအား အခမဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေး
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဟိုက်ဒရာဘတ်မြို့ရှိ တိရစ္ဆာန်ကု ဆေးရုံတွင် ကမ္ဘာ့ တိရစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါနေ့၌ တိရစ္ဆာန်ချစ်သူများက ၎င်းတို့၏ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအား အခမဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးနေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Xinhua/Stringer)
နယူးဒေလီ၊ ဇူလိုင် ၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဟိုက်ဒရာဘတ်မြို့ရှိ တိရစ္ဆာန်ကုဆေးရုံတစ်ရုံတွင် ကမ္ဘာ့ တိရစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဇူလိုင် ၆ ရက်တွင် တိရစ္ဆာန်ချစ်သူများက ၎င်းတို့၏ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအား အခမဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Avian တုပ်ကွေးနှင့် ခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေးများကဲ့သို့ တိရစ္ဆာန်များတွင် ဖြစ်ပွားသည့် ကူးစက်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ပထမဆုံး ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း အထိမ်းအမှတ်နှင့် တိရစ္ဆာန်နှင့် လူများကြား ပျံ့နှံ့နိုင်သော ၎င်းရောဂါများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အသိဉာဏ်မြင့်တက်လာစေရန်အတွက် ကမ္ဘာ့ တိရစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါနေ့အား နှစ်စဉ် ဇူလိုင် ၆ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ (Xinhua)
Pets gets free vaccination on World Zoonoses Day in Hyderabad, India
NEW DELHI, July7(Xinhua) — Pet lovers got their pets for free vaccination on Tuesday on the occasion of World Zoonoses Day ataveterinary hospital in Hyderabad, India.
World Zoonoses Day is observed every year on July6to commemorate the first vaccination administered againstazoonotic disease such as avian influenza and rabies and to raise awareness of those diseases that can spread between animals and people.1 –4– Pet lovers get their pets for free vaccination on the World Zoonoses Day ataveterinary hospital in Hyderabad, India on July 6, 2021. (Xinhua/Stringer)